PPR, Pee, eyi Single Layer ma ọ bụ Multi-oyi akwa Pipe Co-extrusion Production Line - China Qingdao Xinquan Plastic
PPR, Pee, eyi Single Layer ma ọ bụ Multi-oyi akwa Pipe Co-extrusion Production Line
Na ụlọ, okpomọkụ na mmiri fọrọ nke nta iji PPR ọjà. Nke a anwụrụ nwere ike iwunye mfe, ala price na green, ìhè arọ, mma ma dị ọcha, na-eguzogide okpomọkụ, rụrụ arụ, ịzọpụta okpomọkụ na ogologo ojiji.
2. Ihe igwe:
* The extruder na-achịkwa PLC ma ọ bụ okpomọkụ njikwa iru kpọmkwem na ezi okpomọkụ ọchịchị, nke ukwuu na-emesi ndị plasticization ike; Special e ịghasa ana achi achi elu arụmọrụ na elu mmepụta; The elu rigidity na ala mkpọtụ bevel Kwadobe na-eme ka n'aka na a pụrụ ịdabere na-anụ extrusion arụmọrụ ma ogologo ọrụ ndụ;
* The nkesa nke Die na isi eyi, PPR, Pee anwụrụ e mere n'ime gburugburu style ma ọ bụ nkata style. The nnukwu etoola ohere ana achi achi ihe ezuru biri oge nke ihe onwunwe; na ọkpọkọ emepụta bụ nke obere esịtidem nchegbu na-eji ire ụtọ elu; imewe nke ebu bụ nke elu mgbanwe, ọ bụ ike n'ịkpụzi nile di iche iche nke eyi, Pee, PPR ọkpọkọ (abụọ oyi akwa, atọ oyi akwa ma ọ bụ anọ na-oyi akwa).
The multi-oyi akwa anwụrụ mmepụta akara bụ anyị ụlọ ọrụ e mepụtara ọhụrụ igwe, na-3-oyi akwa anwụrụ mmepụta akara ka ihe atụ, n'ime na elu n'ígwé iji ọhụrụ ihe onwunwe, na n'etiti oyi akwa eji recycled plastic + eriri iko ihe onwunwe, a haziri ukwuu na-abawanye ike na tensile nke ọjà, na n'otu oge ahụ belata mmepụta na-eri.
3. ụzụ kwa:
Pipe dayameta mm 90-315MM 110-450 250-630 400-800 630-1200
Ike kg / h 200-400 250-450 250-450 300-500 300-500 400-600 600-1000 600-1100 600-1200 800-1300
Arụnyere ike KW 200 250 250 300 300 350 400 450 500 600
Previous: HDPE Large dayameta oghere Wall asọfe Pipe (N'okpuru-uwa Drainage Pipe) Production Line
Next: Ịkwanyere roofing Profile Production Line
Black Pipe N'ihi aṅụ Water
Ugboro abụọ Wall Plastic Pipe
Ewepụghị drainage Pipe
Mgbanwe Irrigation Pipe
High Pressure sooks Pipe
High Pressure ịkwanyere Pipe
elu okpomọkụ ịkwanyere Pipe
Pipe Ma Fittings
Plastic Ewepụghị Drainage Pipe
Plastic dabere pipe
Popular Ppr Pipe nha Chart
Ppr Pipe Ma Fittings
Ppr Plastic Ọkpọkọ
ịkwanyere Drainage Pipe
ịkwanyere Pipe 150mm
Ịkwanyere Ọkpọkọ N'ihi Water
Obere Plastic Pipe
Obere Plastic Pipe Factory
Piel Plastic Pipe
Labyrinth ntapu mmiri belt mmepụta akara
Ne cylindrical ntapu mmiri anwụrụ producti ...
Insert efere ntapu mmiri anwụrụ mmepụta akara
HDPE Large dayameta oghere Wall asọfe Pipe (U ...
Ịkwanyere, Pee Single Wall corrugated Pipe Production ...
Pee Carbon gburugburu mesikwuru Pipe Production Line